Al-shabaab oo shaacisay tirada dadka ay dileen kadib doorashadii Farmaajo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo shaacisay tirada dadka ay dileen kadib doorashadii Farmaajo (AKHRISO)
Xarakada Al-shabaab ayaa markii ugu horeeysay shaaciyay liiska dadka ay ku dileen qaraxyo iyo falal khaarijin ah, tan iyo markii xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo muddo bil ah hataan kasoo wareegatay.
Inta badan dadka la dilay iyo kuwa qaraxyada ku dhintay ayaa tiro ahaan ka badan kuwa bilihii ka horeeyay, waxayna Al-shabaab sheegtay in dowladda cusub ay si toos ah ugu fashilantay sugidda ammaanka magaalada.
Qeybta hoose ka aqriso liiska ay Al-shabaab shaacisay.
February 13, 2017 oo ku aadan muddo 4 maalmood kadib markii uu doorashadii ku guuleystay madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay oday dhaqameed wax kasoo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee laga keenay magaalada Cadaado.
Oday dhaqameedkan la dilay oo lagu magacaabi jiray Bashiir Xagaley ayaa waxaa lagu toogtay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qeybta lagu iibiyo khudaarta, iyadoo dilkiisa loo adeegsaday bistoolado.
February 15, 2017 waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho lagu dilay oday wax kasoo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Muuse Ilka-weyne, wuxuuna dilka Muuse ka dhacay suuqa weyn ee degmada Wadajir, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah.
February, 18, 2017 waxaa degmada Hodan ee magaalada Muqdisho lagu dilay afhayeenkii hore ee maamulkii Ximan iyo Xeeb Maxamed Cumar Hagafeey, kaasoo mudooyinkii dambe wada-shaqeyn la lahaa dowladda federaalka Soomaaliya.
Maxamed Cumar Hagafey ayaa lagu rasaaseeyay gaari uu saarnaa, waxaana dilkiisa sheegatay Xarakada Al-shabaab, oo iyadu dagaal kula jirta ciidamada shisheeye iyo maamulada ku daaban.
February 18, 2017 waxaa isgoyska Ceel-gaabta ee magaalada Muqdisho lagu weeraray taliye ku-xigeenkii PS-ta ninka lagu magacaabo Xasan Dheere, waxaana rasaas lagu furay gaari ay saarnaayeen isaga iyo ilaaladiisa kasoo gaartay dhaawac culus, waxaana weerarkaasi mas’uuliyadiisa sheegtay Xarakada Al-shabaab, halka dowladda federaalka ay sheegtay inay cambaareeneyso.
February 21, 2017 waxaa degmada X/Jajab ee magaalada Muqdisho lagu toogtay oday dhaqameed lagu magacaabi jiray Cabdi Cumar Ibraahiim, waxaana la isla dhex maraayay in dilkiisa uu ugu wacan yahay isagoo wax kasoo xulay baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
February 22, 2017 waxaa madaafiic lagu weeraray xaruntii hore ee ciidankii cirka Soomaaliya, halkaas oo ay ka dhaceeysay xaflad lagu caleema saarayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
February 24, 2017 waxaa si fool-ka fool ah loo toogtay askari ka tirsanaa ciidamada PS-ta ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu magacaabi jiray Maxamad Cumar, kadib markii ay degmada X/Jajab ku beegsadeen rag hubeysan.
February 25, 2017 waxaa magaalada Muqdisho lagu toogtay oday dhaqameed lagu magacaabi jiray Cusmaan Kheyre oo kamid ahaa dadkii xildhibaanada kusoo doortay Gal-mudug.
Rag hubeysan ayaa Kheyre ku beegsaday isgoyska Cali Kamiin degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdisho, waxaana marka oday la dilo caasimadda caan ka noqotay inay dadku is-weydiiyaan su’aalo ay ka mid yihiin ma xildhibaanada ayuu wax kasoo xulay?.
Ninkaan oo lagu magacaabi jiray C/qaadir Mursal ayaa lagu dilay xaafadda Ceel-dheere ee degmada Dharkeenley, kadib markii rasaas ooda looga qaaday gaari uu watay, waxaana dilkiisa sheegatay Xarakada Al-shabaab.
February 27, 2017 waxaa degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho lagu weeraray mas’uul ka tirsanaa bankiga dhexe ee dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Shire Dhagey, waxaana dhacday inuu isagu ka bad-baaday rasaas lagu furay gaarigiisa, balse waxaa ku geeriyooday darawalkiisii, sidoo kale isla maalintaas waxaa askari ka tirsanaa dowladda federaalka lagu dilay xaafadda suuq-bacaad ee degmada Yaaqshiid.
February 27, 2017 waxaa kale oo dhacay weerar ay ku dhinteen tiro kamid ah askarta dowladda federaalka, kadib markii nawaaxiga Ex. Koontarool Afgooye loo dhigay gaari qarax laga buuxiyay.
Askarta iyo saraakiishooda oo mooday in gaariga looga tagay, ayaa si ay u boola xoofteeyaan saxaafadda isugu yeeray, laakiin waxaa halkaasi ka raacay dhibaato ku keentay dhimashada in ka badan 4, dhaawac iyo waji gabax, kadib markii lagu qarxiyay gaariga xilli ay ku xoonsanaayeen.
February 28, 2017 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay toogasho loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada PS-ta ee dowladda federaalka, kaasoo ay dhib weyn ku qabeen shacabka degmada Dharkeenley.
Askarigan oo lagu magacaabi jiray Mowliid Maxamad ayaa lagu dilay xaafadda Macallim Nuur ee degmada Dharkeenley, iyadoo daqiiqado kadib dilkiisa ay goobta soo gaareen saaxiibadiis Nabad sugidda ka tirsan.
February 28, 2017 waxay aheyd maalin ay dhacdooyinku badnaayeen, waxaana askari kale oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya lagu dhaawacay isla xaafadda Macallim Nuur ee degmada Dharkeenley, kaas oo lagu magacaabo Mukhtaar Maxamuud Geelle.
February 28, 2017 waxaa kale oo dhacay weerar lagu dilay mas’uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo lagu magacaabi jiray C/raxmaan Af-leershe.
Af-leeshe ayaa waxaa dilkiisa loo adeegsaday qarax, kaasoo lala beegsaday xilli uu gaarigiisa saarnaa islamarkaana uu maraayay degmada X/Jajab ee magaalada Muqdisho, waxaana dilkiisa sheegatay Xarakada Al-shabaab.
March 06, 2017 waxaa howlgal abaabulan lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya, kadib markii gurigiisa loogu galay, waxaana sarkaalkaan lagu magacaabi jiray Nuur Cali Isxaaq.
March 08, 2017 weerar kale oo toogasho ah ayaa ka dhacay degaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho.
Rag hubeysan ayaa beegsaday C/laahi Kabaweyne oo kamid ahaa ergadii xildhibaanadaku soo dooratay Galmudug.
March 09, 2017 oo ku beegneyd habeenkii xalay waxaa degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho lagu dilay sarkaal ka tirsanaa minishiibiyada dowladda federaalka, waxaana lagu magacaabi jiray Bashiir Maxamuud Maxamed.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dilka sarkaalkaan ay geysteen rag hubeysan oo aanan la garan.
March 02, 2017 waxaa magaalada Baydhabo lagu dilay haweeney ka tirsanayd maamulka Shariif Xasan ee Koonfur Galbeed, kadib markii lagu weeraray xaafadda lagu magacaabo Mursal oo dhaq-dhaqaaqeedu ku badnaa, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee magaalada Baydhabo.
March 04, 2017 waxaa dharaar cad weerar bambaano ah lagu qaaday maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso, halkaas oo khasaare aan la cayimin uu kasoo gaaray xubno ka tirsan maamulka Gaas ee Puntland.
March 08, 2017 waxaa dhaawac culus loo geystay xildhibaan ka tirsan maamulka Puntland oo lagu magacaabo C/qaadir Faarax Bootaan, kadib markii isagoo gaarigiisa wata lala beegsaday qarax xoogan.
Xildhibaankan ayaa qeyb ka ahaa guddiga ammaanka isagoo ku lug lahaa dagaaladii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay Suuj iyo Garacad.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay weerarka lagu dhaawacay xildhibaankan, iyadoo maamulka Puntland uu aad uga murugooday dhacdadaan.
Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay labo kamid ah ilaalada gudoomiyaha, halka isaguna uu ku dhaawacmay.
Dhinaca kale, waxaa xusid mudan in Al-shabaab ay dad shacab ah oo ka badan 40 ku dishay qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay suuqa Kaawo-Godey ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Fiiro Gaar Ah:- Warbixintaan waxaynu idinkugu soo gudbinay sida ay Al-shabaab u shaacisay.